GX30 ဆိုတာ ဘာလဲ?
GX30 သည် ဖုန်းအင်တာနက်အတွက် ငွေကြိုပေးဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ GX30 သည် ရက် 30 သက်တမ်းရှိပါသည်။ ယခုဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် သင့်ငွေကြိုပေးလိုင်းသည် အသက်ဝင်နေရပါမည်။ GX30 တွင် သုံးစွဲမှု အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာ (3Mbps) နှင့် မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင် 3GB ပါဝင်ပါသည်
GX30 ၏ အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာကို ဘာအတွက် သုံးနိုင်ပါသလဲ?
သင်၏ ကန့်သတ်မဲ့ ဒေတာကို စမတ်ဖုန်းဖြင့် အကုန် သုံးနိုင်ပါသည် (ဥပမာ- ဝဘ်ဆိုဒ်၊ လူမှုကွန်ယက်၊ ဗီဒီယို၊ တေးဂီတ၊ အီးမေးလ်နှင့် အခြားအရာများစွာ)
မည်သူက GX30 ကို စတင်သုံးစွဲနိုင်ပါသလဲ?
U Broadband သုံးစွဲသူများမှလွဲပြီး U mobile ငွေကြိုပေးသုံးစွဲသူတိုင်း သုံးနိုင်ပါသည်
GX30 ဒေတာအစီအစဉ်ကို မည်သည့်စက်များတွင် သုံးနိုင်ပါသလဲ?
GX30 ကို စမတ်ဖုန်းဖြင့်သာ သုံးနိုင်ပါသည်
မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်၏ ကန့်သတ်မဲ့ဒေတာများကို အခြားစက်များသို့ မျှဝေခြင်း ခွင့်ပြုပါသလား?
ကန့်သတ်မဲ့ဒေတာသုံးစွဲမှုသည် သင့်စမတ်ဖုန်းတွင် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးရန်သာဖြစ်ပါသည်။ အခြားစက်များသို့ မျှဝေရန်အတွက် နောက်ထက် အခမဲ့ 3GB မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင်ဒေတာကို မြန်နှုန်းမကန့်သတ်ဘဲ ပေးထားပါသည်။ မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင်ဖြင့် သုံးစွဲမှုအားလုံးကို အဆိုပါကိုယ်တာထဲမှ ဖြတ်သွားပါမည်
ကျွန်ုပ်၏ မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင်ကိုယ်တာ ကုန်သွားပါက ဘာဖြစ်မည်လဲ?
မိုဘိုင်းဝိုင်ဖိုင်အား လျော့ချမြန်နှုန်း 64kbps ဖြင့် ဆက်သုံးနိုင်ပါသည်
GX30 ကို မည်သို့ စတင်သုံးရမည်နည်း?
အဆင့် 1 – MyUMobile အပလီကေးရှင်းကို ဖွင့်ပါ
အဆင့်3– GX30 ကို ရွေး
အဆင့် 1 - *118*1*1# ကိုခေါ်ပါ
အဆင့်2– GX30 သုံးစွဲမှုကို အတည်ပြုပါ
28118 သို့ ON GX30 ကို SMS ပို့ပါ။
GX30 စတင်အသုံးပြုရန် မလျှောက်ထားမီ သင့်ဖုန်းတွင် RM30 လက်ကျန်ရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
ယခုအစီအစဉ်၏ သက်တမ်းမှာ မည်မျှနည်း? လျှောက်ထားမှုနှင့် အသစ်ပြန်စတင်မှု ကာလများကို မည်သို့ တွက်ချက်ရမည်နည်း?
သင့်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုစတင်သည့်နေ့မှစပြီး လျှောက်ထားမှု စတင်ကာ ရက် 30 ကြာသောအခါ အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စပါမည် (GX30 ပြန်စတင်ရန် သင့်ငွေကြိုပေးအကောင့်တွင် ငွေလက်ကျန်ရှိမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်)
လစဉ် အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မစတင်မီတွင် SMS အသိပေးစာကို ရရှိပါမည်လား?
ရပါမည်။ အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စခြင်း မပြုမီ 1 ရက် သို့မဟုတ်2ရက်ကြိုပြီး SMS ပို့ကာ၊ အသစ်ပြန်လည် စတင်ချိန်တွင်လည်း SMS ပို့ပါမည်